Mac-kabashada Qaabka - Sidee inuu ka soo kabsado files Mac ka dib markii formatting
> Resource > Mac > Sidee inuu ka soo kabsado Mac Files ka dib markii formatting Macintosh HD
Ma suurogalbaa in kabsado files Mac ka dib markii formatting?
Jawaabta xaqiiqdii waa HAA! Dhab ahaantii, formatting disk ma tirtiri faylasha aad (haddii files yihiin overwritten by faylasha kale). Marka aad qaab Macintosh HD, nidaamka file ah disk la bedelay nidaam cusub oo madhan file. Sidaas darteed, Entries oo dhan files iyo tusaha badbaadiyey on drive ee waa la nadiifinayaa si ay u tahay geli karin. Si kastaba ha ahaatee, disk ku haysaa file index ah, isagoo u sheegay nidaamka qalliinka computer ee meesha in file gaar ah waxa lagu kaydiyaa. Marka aad qaab drive adag, xiriir oo ka dhexeeya index iyo file waa la tirtiray. Kuwa files lumay weli awood leh, oo aad kara celin files formatted ka Mac hor inta aan la overwritten by files cusub.
Sidee inuu ka soo kabsado disk adag formatted ee Mac
Tan waxaa macquul ah inuu ka soo kabsado files formatted ee Mac, sida inuu ka soo kabsado files Mac uu dhab ahaantii wareersan qaar ka mid ah dadka isticmaala Mac. In kooban, waxaa jira labo siyaabood: Soo Celinta ceshan.
Haddii aad xoojiyaa aad files Mac, waxaad samayn kartaa celin files formatted si fudud ka files gurmad. Haddii aadan haysan wax gurmad ah oo sax ah, waxaad u baahan tahay Mac software qaab kabashada - Wondershare Data Recovery for Mac , inuu ka soo kabsado files formatted ka Mac. Wondershare Data Recovery for Mac Awood aad loo sameeyo, iyadoo aan loo eegayn formatted, tirtiray ama faylasha lumay ay sabab u tahay sababo kala duwan.
Talooyin: Xususin in aan la soo dajiyo Wondershare Data Recovery in ay xijaab la mid ah ama meesha aad badiyay xogta aad si looga fogaado ka overwriting xogta asalka ah.
Haddii aad tahay user Windows ah, si ay u beddelaan Wondershare Data Recovery for Windows .
Step1. Dooro ee "ceeriin Recovery"
Ku rakib oo ay maamulaan kabashada xogta this on your Mac ka dib markii ay soo degsado. Si aad u soo kabsado files formatted ka Mac HD, waxaad u baahan tahay in ay doortaan "ceeriin Recovery", taas oo ay taageertaa dib u soo kabashada ee ku dhowaad dhammaan faylasha lumay.
Step2. Dooro Macintosh HD soo-celinta
Dooro HD Macintosh in aad si qalad ah formatted, oo guji "Scan" si aad u ogaato dhammaan faylasha lumay.
Haddii aadan rabin inaad si aad u ogaato dhammaan faylasha (baar dhammaan faylasha aad qaadan doontaa waqti badan), waxaad isticmaali kartaa "Filter Options" in uu magacaabo nooca file in aad rabto in aad dib u hesho. Markaa waa inaad aadaa "Scan".
Step3. Bilow inuu ka soo kabsado files formatted ka Mac
Marka iskaanka u dhameystiray, waxaad ku eegaan karo natiijada iskaanka iyo hubi kuwa files muhiim ah in aad u soo kabashada.
Video tutorial ah Mac formatted kabashada drive adag
Maxaad u baahan tahay in qaab Macintosh HD?
Waxaa jira qalab dhisay-in magacaabay Utility Disk ee Mac kaas oo kuu ogolaanaya inaad si ay u qabtaan hanaanka qaabka ay ku dhufteen ee "masixi" tab marka la tilmaamayo disk ama mugga. Formatting hagaajin kartaa qaar ka mid ah drive adag oo la xidhiidha dhibaatooyinka macquul ah, laakiin sidoo kale masixi oo dhan files badbaadiyey iyo fayl ku HD Macintosh ah, si caadi ahaan waxaa laga yaabaa in aadan qaab Macintosh HD. Formatting waxaa la sameeyaa oo kaliya si aad u ujeedada gaar ah, sida:
• Si aad u soo saarto virus dilaa ah, taas oo xitaa aan la waayay kartaa software anti-virus ah.
• dib nidaamka qalliinka si uu u xaliyo khaladaad boot ama soo celin maqan nidaamka files.
• Bedel nidaamka file dhaawacan ama dhismayaasha HD Macintosh.
• dhamaan xogta in aadan rabin in laga Mac ah.